Inpeller O-ring-064 Inpeller O-ring-064 Winclan fekitori Tinonakidzwa nesimba rakasimba tekinoroji, zvigadzirwa zvakaisvonaka uye akakwana ekuongorora zviridzwa, kuti tikwanise kukupa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa nemakwikwi mutengo. Taura nesu Nezvedu / Nheyo yedu yakanaka mhando, munguva yekutakura, mutengo unonzwisisika. Kubva kutanga kudiki muna 2004, Winclan Pump yakura kuita mutambi anotyisa mumusika wepombi wepasi rose. Isu tiri ...
Slurry Pump Expeller Mhete-029-A05 Slurry Pump Expeller Mhete-029-A05 Winclan fekitori Tinonakidzwa nesimba rakasimba tekinoroji, zvigadzirwa zvakaisvonaka uye akakwana ekuongorora zviridzwa, kuti tikwanise kukupa iwe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemakwikwi mutengo. Taura nesu Nezvedu / Nheyo yedu yakanaka mhando, munguva yekutakura, mutengo unonzwisisika. Kubva kutanga kudiki muna 2004, Winclan Pump yakura kuita mutambi anotyisa muIntern ...
Slurry Pump Expeller-028-A05 Yaobang Slurry Pump Expellers ari 100% anochinjika neAH slurry pombi. 1.5 / 1B-YA Slurry Pump kodhi: B028 2 / 1.5 B-YA Slurry Pump kodhi: B028 3/2 C-YA Slurry Pump kodhi: C028 4/3 C-YA Slurry Pump kodhi: D028 4/3 D-YA Slurry Pombi kodhi: D028 6/4 D-YA Slurry Pump kodhi: DAM028 6/4 E-YA Slurry Pump kodhi: E028 8/6 E-YA Slurry Pump kodhi: EAM028 10/8 ST-YA Slurry Pump kodhi: SH028 12 / 10 ST-YA Slurry Pump kodhi: SH028 14/12 ST-YA Slurry Pump kodhi: SH028 ...
AF Froth Foam Pump FROTH SLURRY PUMP AF akateedzana AF akateedzana froth slurry pombi ndeyedu kambani kugadzira kwepamusorosoro nekuchengetedza simba, iyo inogadzirwa neShijiazhuang Pump Works'introduction tekinoroji yeAustralia Pump Company. Zvimiro: Yakapetwa kaviri casing mamiriro, hapana chikonzero cheiyo shaft chisimbiso uye yekuvhara mvura; kugona kwepamusoro, kupfeka kusagadzikana, kuita kwakadzikama, kuungana kuri nyore, kugona kwakanaka kwekutyora iyo froth, uye kutungamirwa nebhandi. pamusoro-pari zvino Model kukosha ...
YS Sump Slurry Pump YS Sump Slurry Pump Iyo YS yakatevedzana Vertical Sump Slurry Pump yakagadzirirwa mafomu anoda kuwedzerwa kwakasimba uye kusimba kupfuura kwakajairika kutwasuka maitiro mapombi. Rakananga ruzivo seinotevera: Discharge Diameter 1.5 ″ kusvika 10 ″ (40mm kusvika 250mm) Misoro Range kusvika 160ft (50m) Kuyerera Rate kusvika 6,000gpm (1,350m3 / h) Muenzaniso unoreva: 40PV-YS 40: Outlet Diameter PV: vertical tray YS : Yaobang pombi YS akateedzana YS pombi yakaoma simbi yekuvaka, YSR p ...
YS Sump Slurry Pump YS Sump Slurry Pump Iyo YS yakatevedzana Vertical Sump Slurry Pump yakagadzirirwa zvinoshandiswa zvinoda kuvimbika kwakakwirira nekusimba kupfuura zvakajairika kutwasuka maitiro mapombi. Rakananga ruzivo seinotevera: Discharge Diameter 1.5 ″ kusvika 10 ″ (40mm kusvika 250mm) Misoro Range kusvika 160ft (50m) Kuyerera Rate kusvika 6,000gpm (1,350m3 / h) Muenzaniso unoreva: 40PV-YS 40: Outlet Diameter PV: vertical tray YS : Yaobang pombi YS akateedzana YS pombi yakaoma simbi kuvaka, YSR pombi iri r ...
YG Gravel Pump YG akateedzana Sand Gravel Pump YG akateedzana Sand Gravel Pump ndiyo imwechete nhanho, imwechete casing, centrifugal yakatwasuka pombi. Yakakura kuyerera nzira inoita pombi inobvumira yakakura zvidimbu zvidimbu. Yakareruka mamiriro uye yakakwira chrome alloy liner inoita iyo Sand Gravel pombi hupenyu hwakareba uye nyore kugadziriswa. Rakananga ruzivo seinotevera: Discharge Diameters 4 "to 16" (100mm to 400mm) Heads Range 230ft (70m) kuyerera rate 8,000gpm (4,100m3 / h) Casing Pressure Tolerance 300psig (2,020kPa) Model meani ...
YJ Coal Changu Plup Pump
YJ Coal Mine Plup Pump Iyo YJ yakateedzana Heavy Duty Slurry Pump yakakwenenzverwa cantilevered imwechete-nhanho, imwechete-kubvisa, axial-suction uye centrifugal slurry mbiri-casing pombi. Bazi rinoburitswa rinogona kumisikidzwa pamatanho emadhigirii makumi mashanu nemashanu nechikumbiro uye rinotungamirwa kune chero nzvimbo sere kuti zvienderane nekuisirwa uye kunyorera. 800kw Pakati pakati: PH yeMed ...
YL Ultra Heavy Duty Pump ZVIRATIDZO • Saizi renji (kubuda) 2 "kusvika 4" 50 mm kusvika 150 mm • Unyanzvi kusvika 1,000 gpm kusvika 250 m3 / hr • Misoro kusvika ku150 ft kusvika 46 m ZVAKABATSIRA • Kutakura gungano - dhayamita hombe ipfupi overhang inoderedza kutsauka uye inobatsira kune yakareba inotakura hupenyu. Anongoita mana kuburikidza nemabhaudhi anodikanwa kuti abate iyo katuriji mhando yekugara mufuremu. • Liners - liners zvinotsiviwa zviri nyore zvakasungwa, zvisina kunamirwa, kune iyo casing yechinhu chakanamatira uye kumabvazuva kwema ...
YH Yakakwira Musoro Slurry Pump Sumo Rudzi YH slurry pombi akaiswa cantilevered, yakatwasuka, centrifugal slurry pombi. Iyo furemu yeplate liner uye impeller yeYH pombi inogadzirwa nesimbi isingagone simbi. Iyo shaft zvisimbiso zveYH dzakateedzana zvinogona kusarudza gland chisimbiso kana kudzinga chisimbiso. Bazi rekuburitsa rinogona kutungamirwa kune chero eanzvimbo masere kuti akwane kuiswa uye kunyorera. Kunyorera Izvo zvakagadzirirwa kubata kweanonyanya hasha, yakakwira diki slurries mune yesimbi ...
YA Yakarongedzwa Slurry Pump YA dzakateerana Centrifugal Slurry Pump YA dzakateedzana Centrifugal Slurry Pump ndeyekupedzisira-kubvisa, kupatsanura-kesi, centrifugal slurry pombi, inokodzera nharaunda yakashata pamugodhi. 27% chrome chena simbi kana rabha yakanyoroveswa zvikamu zvinoita kuti pombi ive nehupenyu hwakareba, uye chimiro chakareruka chinoita kuti pombi ichengetedze uye liner kutsiva nyore.YL dzakateedzana slurry pombi yakagadzirirwa mabasa akasimba nepo ichipa yakakwira hunyanzvi, iko kusanganiswa kweiyo yakasarudzika YA yakasarudzika. fe ...